साहिद र सलमानविच तुलना: को हो त सुपरस्टार? – MEDIA DARPAN
साहिद र सलमानविच तुलना: को हो त सुपरस्टार?
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Jul 7, 2019
यो वर्ष रिलिज भएका दुई बलिउड चलचित्र ‘भारत’ र ‘कविर सिंह’ले बक्स अफिसमा निकै राम्रो व्यापार गरे । समिक्षात्मक रुपमा पनि चलचित्र राम्रो ठहरिएका थिए । ‘भारत’बाट नायक सलमान खानको निकै तरिफ भयो । चलचित्रमा सलमानले गरेको मिहिनेत र उनले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गरेका थिए ।
हाल प्रदर्शनरत चलचित्र ‘कविर सिंह’बाट पनि साहिद कपुरले नसोचेको सफलता पाए । चलचित्रको राम्रो व्यापारसँगै उनको कामको पनि निकै तारिफ भयो । ओरालो लागेको साहिदको करिअर यो चलचित्रले नयाँ उचाइमा पुर्याइदिएको छ । यी दुई चलचित्रबाट नायकको चर्चा भएपछि अहिले एक अर्कालाई तुलना गर्न थालिएको छ ।
सलमान खानको ‘भारत’ले इनिसियल रुपमा आक्रामक व्यापार गरेपनि दोश्रो सातादेखि चलचित्रको व्यापार खस्कियो । सलमान यो चलचित्रबाट ३ सय करोडको व्यापार गर्ने सोचमा थिए । तर, चलचित्रलाई दर्शकले औषत भन्दा उनको चलचित्रले २ सय १० करोडको आसपासमा नै अड्कियो ।
यता, नायक साहिद कपुरको चलचित्रले सलमानको ‘भारत’को व्यापारलाई पछि छाडिसकेको छ । साहिदको चलचित्र यो बर्षकै सर्वाधिक कमाउने चलचित्र बन्छ भन्ने अनुमान हुन थालिसकेको छ ।
युरोप सपना र मानव तस्करका शोषणमा पिल्सिन्छन् लिबियामा नेपाली
यसरि पानी पिउँदा पनि घट्छ तौल
अभिनेत्री अदा शर्माले गरिन् न्युड फोटोसुट, फ्यानले गरे प्रश्न, ‘चिसो लागेको छैन ?’
कुल्लीदेखि बस कन्डक्टरको काम गरेका रजनीकान्त कसरी बने…